‘खानेकुरा राम्रो भए पढाइ पनि राम्रो’ - अचानक - नेपाल
‘खानेकुरा राम्रो भए पढाइ पनि राम्रो’
ग्यालरीमा चित्रकला प्रदर्शनी हुनु अनौठो हुँदै होइन । तर, काठमाडौँको बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा विभिन्न कलाकारले रंगाएका चित्रकला प्रदर्शनीमा राखिएको छ, कलिला स्कुले विद्यार्थीका लागि खाजा जुटाउन । टेकुमा रहेको सरकारी विद्यालय सरस्वती निकेतन माविले सञ्चालन गरेको प्रदर्शनीको नाम दिइएको छ, ‘होप’ अर्थात् आशा । प्रदर्शनीको संयोजक रहेका विद्यालयका कला–शिक्षक मदन श्रेष्ठसँगको भलाकुसारी :
चित्रकला प्रदर्शनीको उद्देश्य के हो ?
यो एउटा च्यारिटी कार्यक्रम हो । प्रदर्शनीमा राखिएका चित्र बेचेर आएको रकम बैंक खातामा राख्ने र त्यसबापतको ब्याज विद्यालयका पूर्वप्राथमिक विद्यार्थीको खाजा खर्चमा प्रयोग गरिनेछ ।
बालबालिकाको खाजाका लागि किन खर्च गर्नुपरेको ?
सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको पारिवारिक–आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ । कतिपय बालबालिका खाजा नै नलिई आउँछन् । लिएर आउनेहरूको पनि दैनिकजसो बिस्कुट, चाउचाउजस्ता ‘जंक फुड’ मात्रै हुन्छ । स्वास्थ्यवद्र्धक खानेकुरा हुँदैन । कम्तीमा विद्यालयमा उनीहरूलाई सन्तुलित खाजा खुवाउन सकिन्छ कि भनेर यस्तो प्रदर्शनी गरेका हौँ ।
खाजामा भन्दा उनीहरूलाई छात्रवृत्ति वा अन्य यस्तै शैक्षिक कार्यमा खर्च गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्योजस्तो लाग्दैन ?
पढाइभन्दा पहिले त खाना नै आउँछ । स्वस्थ खाना भयो भने पढाइ स्वत: राम्रो हुन्छ । खानेकुरासँग पढाइको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । बच्चाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि खानेकुरा नै महत्त्वपूर्ण हो । खाजाका कारण पढाइमा समस्या देखिएपछि यस्तो निर्णय भएको हो ।
भनेपछि यो तपाईंहरूको अनुभव हो ?
हो । केही वर्षदेखि विद्यालयका शिक्षकले नै सके अुनसार पैसा उठाएर बालबालिकाको खाजा जोहो गर्दै आएका थियौँ । यसबाट उनीहरूको पढाइमा राम्रो प्रभाव देखियो । त्यसपछि यसलाई थप व्यवस्थित गर्न रकम जुटाउने उपायको खोजीमा लागेका हौँ ।
पूर्वप्राथमिक तहमा कति विद्यार्थी छन् ?
१ सय ८० जना ।
चित्र बेचेर कति रकम उठाउने लक्ष्य छ ?
१३ लाख रुपियाँ जुटाउने लक्ष्य राखेका छौँ । यसअघि हामीले ‘फुड फेस्टिबल’ गरेर सात लाख रुपियाँ जम्मा गरिसकेका छौँ । २० लाख रुपियाँ जम्मा गर्न सकिए पूर्वप्राथमिक तहका बालबालिकालाई खाजा खुवाउने रकम पुग्छ ।
विद्यार्थी संख्या बढेमा खाजा खर्च पनि स्वत: बढ्छ । यदि त्यस्तो भयो भने थप खर्च कसरी जुटाउने योजना छ ?
हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढिरहेको छ । त्यसैले यस्तो समस्या पनि आउन सक्छ । तर, हामीले त्यतिबेला केही न केही उपाय निकाल्नेछौँ । अहिले यसै भन्न सकिँदैन ।
चित्रकला प्रदर्शनीका लागि कलाकारलाई कसरी मनाउनुभयो ?
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द डंगोल आफैँ पेन्टिङ गर्नुहुन्छ । उहाँ यसअघि यही विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । उहाँ र मैले नै बालबालिकाको पढाइका लागि कलाकारहरूले चित्र बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सल्लाह गर्‍यौँ । अनि, आफूसँग सम्पर्कमा भएका कलाकारलाई अनुरोध गर्‍यौँ । शशिविक्रम शाह, किरण मानन्धर, उदयचरण, समुद्रमान श्रेष्ठदेखि कलेज तहका ९२ जना कलाकार सबैले हामीलाई पेन्टिङ दिए । एक सयवटा पेन्टिङ छन् ।
'किसानसँग किन्दा आधा सस्तो'
सस्तो गाइड : आरोहणमा जोखिम
‘आलोचना आलोक हो’ – युग पाठक
‘रैथाने संगीत नै मूलधार’– गायिका झुमा लिम्बू
‘त्यो पाँच सयको नोट सात दिन साटिनँ’– कुलेन्द्र विश्वकर्मा
विश्व बडी बिल्डिङ च्याम्पियन महेश्वर भन्छन्– 'इच्छाशक्ति छ, पैसा छैन’